Tanjona Amin’ny Famoahana 2018: Fampidirana Vondrom-piarahamonina Lehibe Kokoa sy Marolafy Ahitàma Mpandray Anjara Avy Ao Eoropa Afovoany Sy Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2018 4:04 GMT
Amboradara avy ao Hongria, ao anatina modely iray fahita matetika manerana an'i Eoropa Afovoany sy Atsinanana. Sary an'i Paula Kate Marmor avy ao amin'ny Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Ny taona 2018, hanao andrana fijery iray vaovao mikasika ny asanay ireo toniandahatsoratra, ireo filohan'ny sampana ary ireo mpikambana hafa ato amin'ny tarika Global voices: hametraka matetika ny fomba firoso iray vaovao amin'ny fametrahana antsipirihany ireo tanjona ary hanara-maso ireo fivoaranay ao amin'ny Blaogin'ny Vondrom-piarahamonina. Ao anatin'ityy lahatsoratra manaraka ity, hampiseho ireo fandaharanasany mikasika ny ampahany voalohany mandritra ny taona, ny toniadahatsoratry ny faritra Eoropa Afovoany sy Atsinanana, Filip Stojanovski.
Ny Faritr'i Eoropa Afovoany sy Atsinanana (ECE na CEE) dia midadasika sy marolafy, nefa ny ankamaroan'ireo firenena mifampizara zavatra maro itoviany amin'ny resaka lova ara-tantara, fomban-drazana ara-kolontsaina ary rafitra politika (demokrasia miana-mandeha sy ireo fitondrana safiotra). Mitanisa ny ECE ahitana ireo firenena 22 ny fanakilasiana ataon'ny Global Voices
Balkans: Ny Mpifanolo-bodirindrina
Tsy dia hentitra ilay fizaràna, satria ireo firenena sasantsasany azo heverina ihany koa ho tafitra anaty ampahany betsaka kokoa amin'ny faritra maromaro. Ohatra amin'izany, repoblika iray tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha i Moldova, manana fifamatorana ara-politika mivantana, tantara ary ara-kolontsaina amin'i Romania (Balkàna) ary amin'i Rosia sy Okraina (Eoropa Atsinanana). Repoblika fahin tao Yogoslavia i Slovenia (Balkàna) nefa koa mitovy betsaka amin'ireo firenena ao Eoropa Afovoany toarian'ny firoborboan'ny kaominista. Toy izany koa, azo atao ihany koa ny mametraka ny fifamatoran'i Kokazy. Gresy sy Tiorkia dia firenena Balkàna na inona na inona famaritana azy ireo, na dia voakilasy ho Eoropa Andrefana sy Afovoany Atsinanana aza izy ireo ato anaty rafitra fanasokajian'ny GV.
Na eo aza ireo fifamatorana ireo, kely ny fifandraisana eo amin'ireo firenena ao anatin'ny faritra, tsy misy vaovao ifanakalozana ivelan'ireo mpifanolobodirindrina tena mifanakaiky indrindra ary mahakasika ireo olana ara-politika fotsiny na loza goavana sy hetsika ngezabe (fidirana ho ao anatin'ny UE/OTAN, kirizin'ireo mpialokaloka, krizy ara-teo-karena / trosa manerantany). Tsy ahitàna votoatinà media rehefa ny fomba fiteny no ifampizaràna na tena mitovitovy, ary ny mozika malaza anaty tranga tsongaina (ohatra, fanondranana/fanafarana ifanaovana eo amin'ny sehatry ny mozika vakodrazana Balkanika), tsy misy fifanakalozam-baovao ara-kolontsaina na fifaneraseràn'ireo media hafa. Mandavan-taona, lasa tena mitoka-monina sy manirery ireo vahoaka.
Firenena 22, mpanoratra 22, mpanoratra vaovao 2 isam-bolana
Miaraka amin'io an an-tsina any, ny tanjoko ho an'ny taona dia ny hanana, farafahakeliny, mpanoratra iray miasa mavitrka avy amin'ny faritra CEE, na ireo firenena 22 rehetra.
Ho an'ny telo volana manaraka manokana, manantena aho ny hampiditra farafahakeliny mpanoratra roa vaovao isam-bolana, ny idealy dia avy ao anatin'ireo firenena izay mbola tsy voarakotry ny Global Voices. Manantena ihany koa aho hampandray andraikitra amin'ireo mpiara-miasa vaovao ireo mba hanoloran'izy ireo lahatsoratra amina matetitetika.
Vokatr'izany, hitondra fandrakofana iray mifandanja kokoa io amin'ireo firenena sy ireo kolontsaina ary ireo vakoka harena sy ireo olana ankehitriny – izay matetika ifamatoran'izy ireo amin'ny hafa, nefa tsy voajery sy tsapa toy izany rehefa eny amin'ireo mpihaino ao an-toerana, sy any amin'ny faritra ary manerantany.
Eo amin'ny sehatry ny media erantany, matetika i Eoropa Afovoany sy Atsinanana no natao ankilabao sy zara raha hita. Ny fanatsarana ny fahitana an'ireo olana eo amin'ny firenena tsirairay dia hametraka izany eo amin'ny karazana radàra ahitàna bebe kokoa ireo mpandray anjara, ary hanohana ireo ezaka fisoloana vava ataon'ireo mpikatroka mahery fo eo an-toerana miady ho an'ny zo maha-olona, toy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana ny asa fanaovana gazety, izay amin'ny ankapobeny dia miaritra ny zara fa fisian'ny fiarovana ao amin'ny faritra.
Dingana roa no hitondrako ity ezaka ity. Ny dingana 1 dia ahitàna:
mifandray amin'ny vondrom-piarahamonina GV efa misy mba hahazoana fanampiana amin'ny famantarana ireo kandidà vaovao ho an'ireo mpanoratra, na mangataka ny fanampian'izy ireo mba hampiasana ireo tambajotran-tserasera eo an-toerana hanambaràna ny fahafahana manjohy ny GV (ary nahoana moa) ho an'ireo mpamaky mety hitàna andraikitra.
mangataka amin'ny vondrom-piarahamonina sivily goavana manerana ny faritra amin'ny alalan'ny fandefasana imailaka iray amin'ireo fikambanana sahaza mikasika ireo fahafahana miara-miasa amin'ny fizaràna ny votoatiny na amin'ny alalan'ny fampidirana ny mpanoratr'izy ireo manokana mba handrakotra ireo lohahevitra mahaliana azy ho an'ny GV.
mamoaka tsy tapalka ireo zavatra azo ataon'ireo mpanoratra vaovao, miara-miasa amin'ny ekipan'ny media sosialin'ny GV.
mamoaka ary mandika ireo tafatafa miaraka amin'ireo mpikambana efa ao amin'ny vondrom-piarahamonina GV, miara-miasa amin'ireo ekipan'ny Lingua ao amin'ny faritra, ho làlana hanentanana fandraisana anjara ao amin'ny GV.
manomana ireo famelabelarana sy/na fanofanana miaraka amin'ireo ekipan'ny Lingua avy ao amin'ny faritra, raha kely indrindra dia hetsika iray ao amin'ny aterineto na ivelany isaky ny telovolana.
Ny dingana faharoa dia hisy fiarahamiasa amin'ireo mpanoratra vaovao, zotra iray izay hiovaova arakaraka ny haavon'ny hafanampo sy ny fahaizamanaon'izy ireo ara-teknika sy ny traikefany amin'ny asa fanaovana gazety. Vantany vao tsikaritr'izy ireo navoaka ao amin'ny GV ny tantara voalohany nosoratan-dry zareo, hampidiriko ao anaty vondrom-piarahamonina amin'izay izy ireo, ary ho angatahako ny fanampian'izy ireo amin'ny fampidirana ireo mpanoratra vaovao fanampiny.
2 andro izayFidirana
Fifandraisana nomerika mifanaraka amin'ny filàna sy ny zavatra eo an-toerana iainan'ireo vondrom-piarahamonina lavitr'andriana ao Amazonia